Dharka caadiga ah ee Jalisco, oo ah astaan ​​lagu garto qofka reer Mexico | Wararka Safarka
Luis Martinez | 12/05/2021 09:19 | dhaqanka, Mexico
Dharka caadiga ah ee Jalisco wuxuu leeyahay egyihiin badan oo leh dharka caadiga ah mariachista, heer ay inta badan jahwareersan yihiin. Xaqiiqdii, waxaa la rumeysan yahay in kuwa dambe ay ku dhasheen magaalada Jalisco ee Cocula. Si kastaba ha noqotee, iyagu dhab ahaan isku mid ma aha. Midka labaad ee iyaga ka mid ahi wuxuu ku darayaa badhamada surwaalka iyo jaakadda, marka lagu daro inuu leeyahay midabbo badan oo kala duwan.
Si kastaba ha noqotee, dharka caadiga ah ee caadiga ah ee Jalisco, oo maqaalkani ku mashquuli doono, ayaa ah mid miyir leh. Sida magaceedaba ka muuqata, waxaan kuu sheegi doonnaa dharka caadiga ah ee gobolkan Mexico, oo ku yaal qaybta galbeed ee dalka oo xuduud la leh kuwa Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima, iyo sidoo kale Badweynta Baasifigga.
1 Waxyaabaha u gaarka ah dharka caadiga ah ee Jalisco
1.1 Taariikhda dacwada
1.2 Dharka caadiga ah ee Jalisco
1.3 Dharka Jalisco ee ragga
2 Goorma ayaa la isticmaalaa dharka caadiga ah ee Jalisco
2.1 Maalinta Charro
Waxyaabaha u gaarka ah dharka caadiga ah ee Jalisco
Waxaan ku bilaabi doonnaa inaan sameyno xoogaa taariikh ah oo ku saabsan dharkan ka dibna waxaan diirada saareynaa dharka ragga iyo dumarka caadiga ah. Labadooduba aad ayey u kala duwan yihiin, wax badan midab badan oo faraxsan tii dheddigga.
Asalka suud charro, taas oo, sidaad horeba u ogaatay, ay tahay tii soo jireenka ahayd ee ka timi Jalisco, oo soo jirtay ilaa qarnigii XNUMXaad. Si la yaab leh, dharka lagu aqoonsado Mexico ee dibedda wuxuu ku dhashay, sida la aaminsan yahay, dhulalka Isbaanishka, gaar ahaan Salamanca.
Sidaad adiguba ogtahay, dadka daggan gobolkan waxaa loogu yeeraa, si hufan, gawaarida. Iyo, haddii aad eegto dharkooda caadiga ah, waa run inay la mid yihiin dharka Jalisco. Isbaanishka wuxuu ka kooban yahay surwaal madow oo adag, jaakad gaaban oo isku midab ah, iyo kabo fuushan. Sidoo kale, koofiyaddu waa isku mid, in kasta oo leh baalal aad u yar.
Charros oo leh dharka caadiga ah ee Jalisco
Dharkaan ayaa u gudbi lahaa Ameerika markii ay yimaadeen Isbaanishka waana la qaadan lahaa Deegaanka Jalisco. Si kastaba ha noqotee, waxay heshay isbeddello dhowr ah. Qarniyadii xigay, waxaa lagu hagaajiyay iyadoo lagu daray daabacaad gacmeed fara badan iyo qurxin. Horeba XIX, waxay ahayd tii ay adeegsadeen chinacos, waxaa loo bixiyey rag ka shaqeeya beeraha.
Xiisad ahaan, waxaan kuu sheegi doonnaa in boqorka Maximilian oo ka socda Habsburg Wuxuu aad u jeclaa suudka dhuxusha. Xitaa wuxuu u adeegsaday dhowr jeer isagoo isku dayaya inuu la qabsado qarankiisa cusub. Markii horeba kacaankii reer Mexico, dharkaan wuxuu noqday mid caan noqday dharka mexican-ka ah ee muhiimka ah, oo ka sarreysa kuwa caadiga ah ee gobollada kale ee dalka (haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato tan dambe, waanu kugula talineynaa maqaalkan).
Si kastaba ha noqotee, hadda maahan dhammaan dharka dhuxusha caadiga ahi inay isku mid yihiin. Way ku kala duwan yihiin dharka shaqada, dharka buuxa iyo dharka buuxa, in kasta oo ay adag tahay in wax farqi ahi u dhexeeyo. Midka kaliya ayaa degan raaxada daabacaadda iyo qurxinta in ay ku darsadeen. Sidaad qiyaasi lahayd, kuwii hore ayaa ka miyir badan kan dambe, in kastoo dhammaantood aad u qurux badan yihiin oo soo jiidasho leh.
Haddii aad booqato Guadalajara, caasimadda iyo magaalada ugu caansan gobolka Jalisco, kuguma adkaanayso inaad hesho dharkaaga caadiga ah. Caqli ahaan, dadka degan ma isticmaalaan maalin kasta, laakiin way isticmaalaan Waxay ka faa'iideystaan ​​dhacdo kasta oo ay u labistaan. Laakiin, iyada oo aan la sii ambaqaadin, waxaan kaala hadli doonnaa dharka Jalisco ee dumarka caadiga ah.
Jalisco dharka dumarka caadiga ah
Haweenka Jalisco waxay xirtaan labis gabal ah oo goonno dhaadheer leh. Waxaa lagu sameeyay poplin, qoorteeda waa sarreysaa gacmaheeduna waa nooc boorso ah. Sidoo kale, qaybtiisa sare, dhererka xabadka, way xambaarsan tahay kubadaha qaar u eg isdhaafsan Sidoo kale goonadu waa mid aad u ballaadhan.
Ku saabsan midabka, badanaa waa hal cod, inkasta oo tani ka duwan tahay kuwa faraxsan cajaladaha midabka inay isdulsaartay iyo waliba xadhkaha ay isku qurxiso. Sida kabaha, wuxuu ka samaysan yahay xargo wuxuuna leeyahay qalab kala duwan. Ugu dambeyntiina, madaxa timaha waxaa lagu sameeyaa xarigyo u eg kuwa ka muuqda dharka.
Dharka Jalisco ee ragga
Qaar ka mid ah mariachis
Marka laga hadlayo dacwadda dhuxusha ee ragga, waxay ka kooban tahay, qaybteeda sare, shaar ay ku taal a jaakad gaagaaban. Waxay gaartaa qeybta hoose ee feeraha oo gacmaheeda si siman ayey u gaaban yihiin si loo muujiyo qurxinta lacagta ee caruusadaha. Sidoo kale, waa lagu qurxin karaa todobaatan badhan isku mid ah, in kasta oo ay iyaguna dahab noqon karaan.
Sida surwaalka, way adag yihiin, suede ama maro iyo codad madow. Waxay kaloo wataan jar lugaha oo dhan. Dharka waxaa lagu kabayaa kabo gogosha oo midabkeedu yahay midabku.
Xus gaar ah waa in laga sameeyaa koofiyad. Waxaa asal ahaan loogu talagalay inay iska caabbiso waxyeelada qorraxda Jalisco iyo sidoo kale inay ka difaacdo dhicitaanka faraska. Sababtaas awgeed, waxaa lagu sameeyay timo bakayle, dhogor la dareemay ama caws qamadi ah waxayna ku lahaayeen afar dhagxood ama xargaha muraayadooda oo labanlaaban kana dhiga mid adkeysi badan.
Cirifka koofiyaddan caadiga ah waa mid ballaaran oo ballaaran, sidoo kale loogu magac daray dhabarkeeda. Ugu dambeyntiina, waxaa mararka qaarkood lagu qurxiyaa shawl ama gogol daabac leh. Faa'iido ayey u laheyd naqshadeyntaan loogu talagalay shaqada goobta in ay noqotey mid caadi ah Mexico oo dhan.
Ugu dambeyntiina, gabal kale oo aan lagu waayi karin qaabka dhuxusha ayaa ah googoyn. Xaaladdan oo kale, maahan dhar, laakiin waa nooc ka mid ah bustayaal ay fardooleydu wateen oo ay weheliyaan koorsada faraskooda. Sidaa darteed, ma arki doontid marka aad ka qeyb galeyso qoob-ka-ciyaarka ama isboortiga lugta ah, laakiin waxaad arki doontaa marka ay timaado marinnada fardooleyda charros ayaa muujinaya in aan kuu soo bandhigi doonaa xiga.
Goorma ayaa la isticmaalaa dharka caadiga ah ee Jalisco
Runtii, markaan sharaxaad ka bixinno sida ay u egyihiin dharka Jalisco ragga iyo dumarka, waxaan diirada saari doonaa inaan kaala hadlo dhacdooyinka iyo damaashaadka halkaas oo ay ku badan tahay in laga helo dad ku labisan iyaga.
Bandhigga heer sare ee muuqaalka ah ee labbiskaan lagu xidho waa kuwa charrería. Dhacdooyinka fardooleyda dhaqameed ee waddanka Aztec waxay helaan magacan. Waxay ku horumaraan aagag la yiraahdo shiraacyada dhuxusha waxayna ka kooban yihiin fardooleyda oo jimicsiyo kala duwan ku sameynaya dhabarka fardahooda.
Isboorti ahaan, waxay dhalatay bilowgii qarnigii XNUMX-aad si loo xuso shaqooyinka lo'da ee duurka ku jira oo duugoobay. Charrería waxaa lagu abaabulaa Mexico xiriir federaal ah iyo dhaqamadiisa ayaa loo aqoonsaday inay yihiin Dhaxalka aan la taaban karin ee Aadanaha UNESCO ayaa ilaalinaysa.
Xilligan, haweenku sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaaraan charrería. Kaliya maahan sababtoo ah sanad walba mid baa la doortaa reina Taasi waxay mas'uul ka tahay furitaanka xafladaha kala duwan, laakiin sidoo kale maxaa yeelay wuxuu ka qayb qaataa tartamada fardaha. Iyagu waa Amazons ka qayb qaata, wixii ka sarreeya, edbinta loo yaqaan dagaalka charra. Waxay ka kooban tahay kooxo ka kooban sideed amaano kuwaas oo ku sameeya heeso qoraal ah dhabarka fardahooda iyo laxanka miyuusigga.
Laakiin, nasiib wanaag, jaangooyooyin aad iyo aad u badan ayaa lagu dhiirrigelinayaa inay ku dhaqmaan noocyo kale oo bandhig ah. Ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, waanu kuu sheegi doonaa cove faraska, dibiga iyo fardooleyda fiayayaasha, biimoolayaasha ku yaal shiraac, mangaaska lugta ama faraska, liiska giraanta ama talaabada dhimashada.
Caqli ahaan, kiisaskaas dumarku waxay xirtaan noocyo kale oo qalab ah oo loogu talagalay suudhadooda. Dhexdooda, kabo burooyin leh spurs, koofiyad iyo shaqaale. Intaas waxaa sii dheer, waxay faraska dul saaraan buur gaar ah oo loo yaqaan xirmo.
Charros oo matalaya marinka dhimashada
Charrería wuxuu ku midoobay dhaqanka Mexico in 14-ka Sebtember dalka Aztec u dabaaldego Maalinta Charro. Dhulkeeda oo dhan (haddii aad rabto inaad ka akhriso maqaal ku saabsan Veracruz, riix halkan) bandhig faneed iyo muusig ayaa la qabtaa si loo xuso. Ku saabsan tan dambe, ka mariachi iyagu waa halyeeyada buuxda.
Ku saabsan gobolka Jalisco, oo aan ka hadlayno, taariikhdaas Guadalajara waxay u dabaaldegtaa Shirka Caalamiga ah ee Mariachi iyo Charrería. Sidaad qiyaasi karto, jidadka caasimada waa la qurxiyay kumanaan rag iyo dumar ahna way dhex socdaan iyaga oo ku labisan dharka caadiga ah ee Jalisco una turjumaya muusikada dhaqanka.
Dhacdooyinka badanaa waxay ku urursan yihiin Fagaaraha Xorriyadda, halkaas oo ay ka jiraan xaflado badan. Laakiin sidoo kale waxaa jira bandhigyo, bandhigyada gala ee Masrax cunaha iyo xitaa dad badan oo laga heesay Basilica ee Zapopán.
Kooxaha dadku waxay qabtaan noocyada muusikada sida Sharoobada Tapatio, sidoo kale loo yaqaan "koofiyaddii Mexico" maxaa yeelay waxaa looga tagay dhulka oo hareeraheeda lagu cayaarey. Waa qoob ka ciyaar shukaansi ah oo asal ahaan aan ka raadinayno Kacaankii Mexico.
Sidoo kale caan ku ah dabaaldegga noocan ah ayaa ah Culebra, qoob-ka-ciyaarka dib-u-soo-celinta shaqada ee beeraha, Iguana iyo Faras ruxid, oo ay ka mid yihiin qoob ka ciyaarka kale ee turjumaanadu qabtaan markay dhageysanayaan mariachis cod. Tani waa magaca heesaha la socda qoob-ka-ciyaarka iyo bandhigyada charrería taasna, sidaa darteed, waxay si dhow ugu xiran yihiin dharka caadiga ah ee Jalisco.
Gabagabadii, waanu kuu sheegnay dharka caadiga ah Jalisco rag iyo dumarba. Laakiin waxaan sidoo kale kuu sharaxnay muhiimadda adduunka ee charrería ee Mexico, oo ay ku jiraan dharkan iyo waliba dhawaaqyada mariachi. Waxaas oo dhan waxay habeeyeen dhaqan ka soo gudbay soohdimaha waddanka Aztec si ay caan uga noqdaan adduunka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Dharka caadiga ah ee Jalisco